Indlela i-Biogeography isekela ngayo iNzululwazi
Ubungqina obungabonakaliyo obuvela kwi-biogeography bubonisa ukuzalwa okuqhelekileyo.
I-bioographyography isifundo sokuhanjiswa kweefom zobomi kwiindawo zeendawo. I-Biogeography ayikuboneleli nje ubungqina obuninzi bokuziphendukela kwemvelo kunye nohlobo oluqhelekileyo , kodwa lukwabonelela ngento eyenziwa ngabantu abadalwa yizinto ezidalwa ukuveliswa kwemvelo. I-Biogeography iyahlula kwiindawo ezimbini: i- biogeography ecology, ejongene neendlela zokuhambisa ngoku kunye ne- biogeography zembali, ejongene nokunikezelwa kwexesha elide nelikhulu.
Biogeography kunye neZityalo
I-Biogeography mhlawumbi ayiqhelekanga kubantu abaninzi njengenzululwazi ngokwayo, mhlawumbi ngenxa yokuba kuxhomekeka kakhulu kumsebenzi owenziwe ngokuzimeleyo kwizinto ze-biology kunye ne-geology. C. Barry Cox kunye noPeter D. Moore babhala kwisicatshulwa sabo I- Biographie: Indlela yokuCwangcisa ngeNdalo kunye neNguqulelo , i-7th edition:
Iipatheni ze-biogeography ziyimiphumo yokusebenzisana phakathi kweenjini ezimbini ezinkulu zeplanethi yethu: i-evolution kunye ne-tectonics ye-plate .... Ngenxa yokuba ibhekane nemibuzo eninzi, i-biogeography kufuneka ibonise uluhlu olubanzi lwezinye iinqununu. Ukuchaza izinto eziphilayo, umzekelo, kubandakanya ukuqonda imbonakalo yemozulu phezu kobuso bomhlaba, kunye nendlela yokuveliswa kwezityalo ze-photosynthetic ehluke ngayo kwimozulu kunye noluntu.
Kufuneka siqonde ukuba yini eyenza indawo yokuhlala ekhethekileyo ezilwanyana kunye nezityalo; kutheni kutheni indawo ze-chemistry ethile yomhlaba, okanye amanqanaba omswakama, okanye udidi lweqondo lokushisa, okanye isakhiwo sendawo, kufuneka sibe yinto enqwenelekayo. Ngenxa yoko, iimeko zendalo, i-geology, isayensi yesayensi, i-physiology, i-ecology kunye nesayensi yezenzo kufuneka zenziwe zonke ukuphendula imibuzo enjalo ....
I-bioographie, ngoko, ixhala ngohlalutyo kunye nenkcazo yeendlela zokuhambisa, kunye nokuqonda utshintsho ekuhanjisweni okwenziwe kwixesha elidlulileyo kunye ne-arc eyenzeka namhlanje.
I-Biogeography neScientific Predictions
Inzululwazi iyaqhubeka nokukwazi ukudala izibikezelo ngesiseko seengcamango okanye inkcazelo ecetywayo; kwinqanaba apho iziprofeto ziyimpumelelo kwimpumelelo yombono okanye inkcazo. Isibikezelo esenziwe ngokubakho ngokuzibonakalisa oku: yiyo, ukuba kukho imvelaphi, ngokwenene, kufuneka sikulindele ngokubanzi ukuba iintlobo ezinxulumene ngokusondeleyo zifunyaniswe kufuphi, ngaphandle kokuba kukho izizathu ezilungileyo ukuba zingabi ukuhamba okukhulu (umzekelo, izilwanyana zaselwandle, iintaka, kunye nezilwanyana ezisasazwa ngabantu, okanye, ngaphezu kwamaxesha amaninzi, i-tectonic plate).
Ukuba, nangona kunjalo, sifumene ukuba iintlobo zazisasazwa ngendlela engafanelekanga, kunye neentlobo ezinxulumene nazo ngokungekho sikhulu ukuba zibekwe eduze komnye nomnye kunokuba kungenjalo, oku kuya kuba bubungqina obuqinileyo bokuziphendukela kwemvelo kunye nokuzalwa okuqhelekileyo. Ukuba iifom zobomi zavela ngokuzimeleyo, umzekelo, kuya kwenza ingqiqo eninzi, ukuba ingabikho, ukuba ikhona apho indawo leyo ingabaxhasa ngayo, ngokuchasene nokusabalaliswa ngokuhambelana nobume babo obubonakalayo nezinye iifom zobomi.
Inyaniso kukuba, njengoko unokulindela, ukuba ukuhanjiswa kwezinto zezinto eziphilayo kukuxhasa ukuziphendukela kwemvelo . Iintlobo zithunyelwa kwihlabathi jikelele ngokubanzi ngokumalunga nobudlelwane babo bokuzalwa komzimba, kunye nezinye izinto ezingaqondakaliyo. Ngokomzekelo, ama-marsupials atholakala phantse e-Australia kuphela, kanti izilwanyana ezinobuncwane (kungabalwa kwalabo abaziswe khona ngabantu) ziqabile kakhulu e-Australia. Ukuba ngaba ama-marsupials asasazwa ngokufanayo kwihlabathi, nangona kunjalo, kuya kuba nzima ukuchaza ukuba njengemveliso yenkqubo yokuziphendukela kwemvelo.
Izimbalwa ezimbalwa ezibonwa e-Australia zichazwa yi-continental drift (khumbula ukuba iNingizimu Melika, i-Australia kunye ne-Antarctica yakuba yinxalenye yelizwekazi elilodwa) kunye nokuba ezinye izilwanyana, ezifana neentaka neentlanzi, ziyakwazi ukufudula kude naphi na baqala kuqala.
Kwakuya kumangaliswa ukuba akukho nto ikhona ngaphandle kwayo, kodwa ubukho bezo zinto zingabonakalisa ukuba ininzi yeentlobo zinikwe ngokwahlukileyo kwimihlaba ngendlela ezenzeka ngayo izinto zokuziphendukela kwemvelo. Ukusabalaliswa kwezinto eziphilayo ngokuhambelana nobuhlobo bezinto eziphilayo kubonisa ingqiqo ukuba izinto eziphilayo zenzeka.
Biogeography kunye neEcology
Enye indlela apho i-biogeography inikezela ubungqina obungapheliyo bokuziphendukela kwemvelo yimiba yokungenisa iintlobo zasemzini kwindawo engazange ibe khona. Njengoko kuphawuliwe ngasentla, ukudalulwa okhethekileyo kwintlobo nganye okanye ukuzimela kwabo kubangele kukhokelela ekuhanjisweni kokufanisana nomaphi apho imeko iya kubaxhasa, kodwa inyaniso kukuba zonke iintlobo zikhona kwiindawo ezithile apho zingaphaya khona.
Ngamanye amaxesha abantu baye bazisa ezo zityalo kwiindawo ezintsha, kwaye ngokuqhelekileyo oku kuye kwaba nemiphumo emibi. Ukuziphendukela kwemvelo kuchaza ukuba kutheni: iintlobo zendawo, ezizalwayo zenzeke kunye kunye kwaye zatshintshile iindlela zokujongana neengongelo zendawo okanye ukuxhamla izibonelelo zendawo. Ukuqaliswa ngokukhawuleza kwezilwanyana ezintsha ezingabikho naliphi na ukhuseleko kuthetha ukuba le ntlobo esitsha ingaqhutyana nokuncintisana ncinane okanye akukho ncintiswano.
Izilwanyana ezintsha zingonakalisa izilwanyana zasekhaya; ezintsha izityalo zingonakalisa izityalo zendawo zendawo; izityalo ezitsha zikwazi ukubeka amanzi, ilanga, okanye ubutyebi bomhlaba ukuya kwindawo yokucima ubomi bezityalo zendawo. Njengoko kuphawuliwe, oku kunengqiqo kwimeko yokuziphendukela kwemvelo apho zonke iintlobo ziguqukile phantsi kweengcinezelo zeemeko zendawo, kodwa bekungekho sizathu sokuba oku kuyenzeka ukuba zonke iintlobo zenziwe ngokukodwa kwaye ngoko zifanelwe ukuhlala kunye nawaphi na elinye iqela iintlobo kuyo nayiphi na indawo engaqhelekanga kodwa efanelekileyo.
I-Sant Kabir (1440 ukuya ku-1518)
Uhlanga lwe-Anglo-German Naval Race
U-Emerald Ash Borer (u-Agrilus planipennis)
Uthando lweeCotes ezivela kwiMusic Music Famous
Ukuqeqeshwa koMnqamlezo ukuPhucula ukuKhubha kwakho
Incwadi ebhaliweyo yoBhala: iiNcwadi zoBango